သင်ဇာရဲ့ Facebook အကောင့်ကို မသမာတဲ့ နည်းနဲ့ ဟက်ဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့သူကို ထိမိလွန်းတဲ့ စကားလုံးတွေနဲ့ သတိပေးစကား ဆိုလိုက်တဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော် – Nyi Ma Lay
သင်ဇာရဲ့ Facebook အကောင့်ကို မသမာတဲ့ နည်းနဲ့ ဟက်ဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့သူကို ထိမိလွန်းတဲ့ စကားလုံးတွေနဲ့ သတိပေးစကား ဆိုလိုက်တဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်
By Ko AyePosted on March 15, 2022 March 15, 2022
ပရိသတ်ကြီး ရေ သင်ဇာလို့ ပြောလိုက်တာနဲ့ ခပ်မိမိ ခပ်မိုက်မိုက် ခပ်ဟောဟော့ ထိပ်တန်း မင်းသမီး တွေထဲ က တစ်ယောက် ဆိုတာ ပြောစရာ မလိုအောင် သိကြမှာပါ ။ သူမ အနေနဲ့ လတ်တလော မှာ သူမ ကြုံတွေ့ ​နေရ တဲ့ အဖြစ်ကို ပြောပြ ရင်ဖွင့် ခဲ့တာပါ ။
” ဘယ် သူတောင်းစား ငါ့ Facebook ကို လာ ဟက် နေတာလဲ ? ၃ ရက် ဆက်တိုက် ရှိပြီ reset password တွေ code တွေ လာလာပို့ နေတာ … အာရုံ နောက် လာပြီ 😡😡😡ဘာလို ချင်လို့လဲ ဒဲ့လာ ပြော အဲ့လို မသမာတဲ့ နည်းနဲ့ လုပ် မနေနဲ့ … ငါ့ Facebook ထဲမှာ ဘာမှမရှိဘူး 😌 ဟက် ပြီးမှ ဘာမှ မတွေ့လို့ မောသွား မယ် 😂😂😂”ဆိုတဲ့ စာနဲ့ နှောက်ယှက် နေတဲ့ သူကို သတိပေး စကား​ ဆိုလာခဲ့တာပါ ။
အမြဲ အေးဆေး နေတတ်ကာ တော်ရုံ ကို မတုန့်ပြန် တတ်တဲ့ သင်ဇာ တစ်ယောက် ဒေါသူပုန် ထရလောက်တဲ့ ထိနှောင့်ယှက် နေတဲ့ သူ က တော့ တကယ် ဆိုးလွန်း ပါတယ်နော် ။
Source – ThinzarWintKyaw
Credit ; Cele Chit thu
ပရိသတ္ႀကီး ေရ သင္ဇာလို႔ ေျပာလိုက္တာနဲ႔ ခပ္မိမိ ခပ္မိုက္မိုက္ ခပ္ေဟာေဟာ့ ထိပ္တန္း မင္းသမီး ေတြထဲ က တစ္ေယာက္ ဆိုတာ ေျပာစရာ မလိုေအာင္ သိၾကမွာပါ ။ သူမ အေနနဲ႔ လတ္တေလာ မွာ သူမ ၾကဳံေတြ႕ ​ေနရ တဲ့ အျဖစ္ကို ေျပာၿပ ရင္ဖြင့္ ခဲ့တာပါ ။
” ဘယ္ သူေတာင္းစား ငါ့ Facebook ကို လာ hack ေနတာလဲ ? ၃ ရက္ ဆက္တိုက္ ရွိၿပီ reset password ေတြ code ေတြ လာလာပို႔ ေနတာ … အာ႐ုံ ေနာက္ လာၿပီ ဘာလို ခ်င္လို႔လဲ ဒဲ့လာ ေျပာ အဲ့လို မသမာတဲ့ နည္းနဲ႔ လုပ္ မေနနဲ႔ … ငါ့ Facebook ထဲမွာ ဘာမွမရွိဘူး ဟက် ၿပီးမွ ဘာမွ မေတြ႕လို႔ ေမာသြား မယ္ ”ဆိုတဲ့ စာနဲ႔ ေႏွာက္ယွက္ ေနတဲ့ သူကို သတိေပး စကား​ ဆိုလာခဲ့တာပါ ။
အျမဲ ေအးေဆး ေနတတ္ကာ ေတာ္႐ုံ ကို မတုန႔္ျပန္ တတ္တဲ့ သင္ဇာ တစ္ေယာက္ ေဒါသူပုန္ ထရေလာက္တဲ့ ထိေႏွာင့္ယွက္ ေနတဲ့ သူ က ေတာ့ တကယ္ ဆိုးလြန္း ပါတယ္ေနာ္ ။
Previous post မကြေးစည်ဇာတ်လမ်းထဲကမိုးဝါလေးဆံပင်အရှည်နဲ့လည်း လှနေတဲ့ သူမ အခုတော့ဆံပင်အတိုလေးနဲ့ နောက်တစ်မျိုးပြောင်းလဲလှပနေတဲ့ ခွန်းနေခြည်ချို
Next post ခက်ခဲစွာနေခဲ့ရတဲ့ အကျဉ်းထောင်ထဲက ဘဝအမောတွေနဲ့ စိတ်ပင်ပန်းမှုတွေကို ငပိလီကမ်းခြေမှာ ဖြေဖျောက်ရင်း အပန်းဖြေနေတဲ့ ပိုင်တံခွန်